I-Bortezomib powder (179324-69-7) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / I-Bortezomib powder (179324-69-7)
SKU: 179324-69-7. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Bortezomib powder (179324-69-7), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Bortezomib liyi-anti-cancer drug and first antibiotic proteasome inhibitor ekufuneka isetyenziswe kubantu. Ii-proteasomes ziyi-complex complexes eziphula amaprotheni. Kwezinye i-cancer, ii-proteins eziqhelekileyo zokubulala iiseli zomhlaza ziyaqhekeka ngokukhawuleza. I-Bortezomib iphazamisa le nkqubo kwaye ivumela ezo proteins zibulale amaseli omhlaza. Ivunyiwe e-US naseYurophu ekuphatheni i-myeloma ne-vestima ye-lymphoma. Kwi-myeloma eninzi, iimpendulo zeekliniki ezipheleleyo zifunyenwe kwizigulane ezinezinye izikhumbuza okanye izifo eziqhubekayo ngokukhawuleza.
I-Bortezomib powder Abalinganiswa basisiseko
I-Raw Bortezomib powder ekusebenziseni
I-Boronic acid, i-Velcade, i-Neomib, iBortecad
Ukusetyenziswa kwePowderomib powder
I-Bortezomib powder yi-drug anti-cancer and first inhibitor proteasome inhibitor ekufuneka isetyenziswe kubantu. Ii-proteasomes ziyi-complex complexes eziphula amaprotheni. Kwezinye i-cancer, ii-proteins eziqhelekileyo zokubulala iiseli zomhlaza zidilizwe ngokukhawuleza. I-Bortezomib powder iphazamisa le nkqubo kwaye ivumela ezo proteins zibulale amaseli omhlaza. Ivunyiwe e-US naseYurophu ekuphatheni i-myeloma ne-vestima ye-lymphoma. Kwi-myeloma eninzi, iimpendulo zeekliniki ezipheleleyo zifunyenwe kwizigulane ezinezinye izikhumbuza okanye izifo eziqhubekayo ngokukhawuleza.
I-boron i-Boronomib iplaski eluhlaza idibanisa indawo ye-catalytic ye-26S proteasome enobudlelwane obuphezulu kunye nobume. Kwiiseli eziqhelekileyo, iproteasome ilawula ukuthetha kweprotheni kunye nokusebenza ngokuthotywa kweeprotheni ezinobuninzi, kwaye ihlambulula iseli yeeprotheni ezingaqhelekanga. Iinkcukacha zekliniki kunye neenkcukacha zengqungquthela zenza indima ekugcineni i-phenotype engapheliyo yamaseli e-myeloma, kwaye i-cell-culture kunye ne-xenograft idatha isekela umsebenzi ofanayo kumdlavuza we-tumor. Nangona iindlela ezininzi zinokuthi zibandakanyeke, ukuvinjelwa kweproteasome kunokuthintela ukuthotywa kwezinto eziphambili ze-pro-apoptotic. Kungekudala, kwafunyanwa ukuba i-Bortezomib powder ibangele utshintsho olukhawulezayo kwaye lukhulu kumanqanaba eepraptide zangaphakathi eziveliswa yi-proteasome.  Ezinye iiproptide ze-intracellular ziye zaboniswa ukuba zisebenza kakuhle, kwaye ngoko umphumo we-Bortezomib powder eluhlaza amanqanaba eepraptide ze-intracellular zingabangela inxaxheba kwizinto eziphilayo kunye / okanye iziphumo zecala.
I-Bortezomib powder idibene ne-peripheral neuropathy kwi-30% yezigulane; ngamanye amaxesha, kunokuba buhlungu. Oku kunokuba kubi nakwizigulane ezine-neuropathy zangaphambili. Ukongezelela, ukutshatyalaliswa kwemithi eyenza i-neutropenia kunye ne-thrombocytopenia nayo iyakwenzeka kwaye ibe nokunciphisa umthamo. Nangona kunjalo, ezi ziphumo zempembelelo zihlala zihambelana nomnxeba we-bone kunye nokunye ukhetho lwezogulane ezinezifo eziphambili. I-Bortezomib powder eluhlaza ihambelana nomlinganiselo ophezulu weentsimbi, nangona iprophylactic acyclovir inokunciphisa ingozi yale nto. I-nephritis eqhelekileyo ye-interstitial ikwabikwa kwakhona.
Imiphumo ye-Gastro-intestinal (GI) kunye ne-asthenia yizona ziganeko ezibi kakhulu.
Iimpembelelo ze-Bortezomib powder eluhlaza njenge-arhente enye iboniswe kwimizekelo ye-xenograft ye-myeloma eninzi, i-T cell cell, i-lung, ibele, i-prostate, i-pancreatic, intloko nentamo, nomhlaza wesi-colon, kunye ne-melanoma. I-Oral Bortezomib powder 1.0 mg / kg imihla ngemihla ye-18 iintsuku kubangela ukulibaziseka kokukhula kwe-tumor, kunye nokuncipha kwinani leemastastase kwi-model ye-Lewis yomdlavuza wemiphunga. I-Bortezomib powder kwi-dose enye ukuya kwi-5 mg / kg ngokukhawuleza yanciphisa isahluko esiseleyo seeseli zesisu sebele. I-Bortezomib powder i-1.0 mg / kg elawulwa ngeveki nganye kwii-4 iiveki iyanciphisa ukukhula kwe-tumor nge-60% kwimizekelo ye-murine xenograft yomhlaza wesibeletho. I-1.0 mg / kg I-Bortezomib yolawulo lwe-powder eluhlaza kwiiveki ze-4 iphumela kwi-72% okanye i-84% yokunciphisa umdlavuza we-pancreatic murine xenografts ukukhula, kunye nokwanda kwe-cell cell apoptosis. I-1.0 mg / kg Ukwelashwa kwe-Bortezomib powder kuphumela ekukhuseleni okukhulu kwe-plasmacytoma ukukhula kwe-xenograft, ukwanda kweeseli ze-tumor i-apoptosis kunye nokuphila ngokubanzi, kunye nokuhla kwe-angiogenesis ye-tumor.
Isilumkiso kwi-Bortezomib powder eluhlaza
Ukujoliswa kwendlela ebizwa ngokuba yi-ubiquitin-proteasome kuye kwavela njengendlela yokwenza ingqiqo kwonyango lomntu. Ngokusekelwe kwizifundo ezinobuncwane kunye nekliniki, iBurtezomib powder ebomvu yavunywa ngokugqithisiweyo ukwenzela ukuba unyango lwangaphambili lusetyenziswe unyango lwangaphambili lwezigulane ezininzi ze-myeloma kunye nokunyangwa kwe-myeloma kunye ne-vestima ye-slim cell, apho le nkunkuma ibe yintlaba yonyango. Ukuvunyelwa kwe-Bortezomib powder yi-US Food and Drug Administration (i-FDA) imele into ebaluleke kakhulu njengendlela yokuqala yeprotasome inhibitor ekufuneka isetyenziswe kunyango lwesifo esibi. I-Bortezomib powder eluhlaza ibonise inzuzo enokliniki enokuthi yedwa okanye njengenxalenye yonyango oluxakanyayo ukunyusa i-chemo- / i-radio-sensitization okanye ukunqoba ukunyanzelwa kweziyobisi. Enye yeendlela eziphambili ze-Bortezomib powder edibene nomsebenzi wayo wokulwa ne-antiticancer yi-NOXA, okuyiprotheni yeproapoptotiki, kwaye i-NOXA inokusebenzisana namaprotheni anxamnye ne-apoptotic ye-Bcl-2 encinane ye-Bcl-XL ne-Bcl-2, kwaye kwi-cell apoptotic ukufa kwiiseli ezinobungozi. Enye indlela ebalulekileyo ye-Bortezomib powder eluhlaza kukudityaniswa kweendlela ze-NF-κB zokubonisa ukuphumela kwe-down-regulation of its anti-apoptotic target genes. Nangona ininzi impumelelo ephunyeziweyo kunye nePortezomib powder iye yaba kwiimpawu ezibangelwa i-hematological, igalelo layo kwizondo eziqinileyo sele liphantsi kokukhuthaza. Ukongezelela, ukusetyenziswa kweeklinikhi ezisemgangathweni ye-Bortezomib powder iyaqhubeka inganyanzelwa ukubonakala kwezilwanyana ezinobungozi, ukuchithwa kwamachiza kunye nokuphazamiseka kwamanye amaqumrhu. Ezi ziphumo zikunceda ukukhokela oogqirha ekuncediseni ukusetyenziswa kweklinikhi ye-Bortezomib powder eluhlaza, kunye nokukhuthaza oososayensi abayisiseko ukuba bavelise isizukulwana esilandelayo isi-proteasome inhibitors esandisa i-spectrum ye-effectiveness kwaye ivelise impendulo eqhubekayo kliniki kwizigulane zomhlaza. Ezinye izicelo ezinqwenelekayo zokusetyenziswa kwe-proteasome inhibitors ziquka ukuphuhliswa kwama-inhibitors ngokubhekiselele kwi-E3 ligase, ezenza isinyathelo sokuqala kwi-ubiquitin-proteasome, kunye nokufumanisa kwe-inhibitors engaphantsi kwezinto ezinobuthi kunye nemveli yemithi nemveli, unokubonelela ngokugqithiseleyo abaviwa beziyobisi be-chemoprevention yomhlaza kunye nokonyango lwezigulane zomhlaza esikhathini esizayo.
I-Bortezomib powder yiyilisi ekhubaza i-mammalian 26S proteasome. Inqubo ye-ubiquitin-proteasome idlala indima ebalulekileyo ekulawuleni ingxube ye-intracellular yeeprotheni ezithile, ngaloo ndlela igcine i-homeostasis ngaphakathi kweeseli. Ukuvinjelwa kwe-26S proteasome kuvimbela le proteolysis ejoliswe kuyo, enokuchaphazela ukutyhilwa kwemida emininzi kwiseli. Ukuphazamiseka kwezixhobo eziqhelekileyo ze-homeostatic kungakhokelela ekufeni kweseli. Iingcaphephe zibonise ukuba i-Bortezomib powder eluhlaza yicyotoxic eya kwiindidi zesifo somhlaza kwi-vitro. I-Bortezomib powder eluhlaza ibangela ukulibaziseka ekukhuleni kwe-tumor kwi-vivo kwiimpawu zengxube ezingekho komzimba, kuquka i-myeloma eninzi. Iiseli ezixhamlayo, oko kukuthi, ukwahlula iiseli ngokukhawuleza, kubonakala ngathi zivelele ngakumbi kwi-proteasome inhibition.
I-Bortezomib powder yi-inhibitor eguquguqukayo yomsebenzi ofana ne-chymotrypsin we-26S proteasome kwiiseli zamamalia. I-proteasome ye-26S yiprotheyini enkulu eyenza ihlaziye iiprotheni ezingabonakaliyo. Indawo esebenzayo yeproteasome ine-chymotrypsin-like, trypsin-like, kunye ne-postglutamyl peptide umsebenzi we-hydrolysis. I-proteasome ye-26S ihlaziya iiproteni ezahlukileyo ezixhomekeke kumdlavuza wesifo somhlaza, njengama-cyclins, abaxhasi be-tumor, i-BCL-2, kunye ne-cyclin-dependent kinase inhibitors. Ukuvinjelwa kwezi ngcoliso kwenza iiseli zibe yi-apoptosis. I-Bortezomib powder ebomvu iyisishibitor esinamandla se-26S proteasome, esenza umsebenzi wokuhlukanisa iindile ze-myeloma kunye namachiza omhlaza, ngaloo ndlela zenza i-apoptosis. Ukongezelela, i-Bortezomib powder ibonakala iyandisa ukwanda kweeseli zomhlaza kwiimpawu zendalo (i-gemcitabine, i-cisplatin, i-paclitaxel, i-irinotecan, kunye ne-radiation).
Ubukhulu bombhobho weBorthomib
Raw Bortezomib powder Ukuthengisa
Indlela yokuthenga i-Bortezomib powder esuka kwi-AASraw
I-Bortezomib Raw Powder Recipes: